နေအိမ် - ကျွန်ုပ်၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
ရိုးရိုး / နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတု
အစစ်အမှန် / အတု ID ကဒ်များ
Express VISA အတွက်လျှောက်ထားပါ
IELTS ၊ TOEFL ၊ TOEIC
တရားဝင် / အတုမြေယာခေါင်းစဉ်များ
ရီးရဲလ် Express ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အွန်လိုင်း
DL အမျိုးအစားများ A, B, C
ဥရောပမှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်မှာ မှာယူရမလဲဆိုရင် သင်က ဂျာမနီမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ်...
Residence Permit အွန်လိုင်းကိုဝယ်ပါ
တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကို အွန်လိုင်းကနေ ဝယ်ယူပြီး MDL မှာ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ ကနေဒါမှာ နေထိုင်နိုင်ပါတယ်...
Real Express Passport Online ကိုဝယ်ပါ
အွန်လိုင်းမှ အမြန်ရောင်းရန် ကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ဇီဝမက်ထရစ်ဖြင့် မှန်ကန်ပြီး တရားဝင်သော ကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ရယူပါ...
Bitcoin မှတစ်ဆင့် စာရွက်စာတမ်းများအတွက် ပေးချေပါ သင်သည် Bitcoin နှင့် ကျွမ်းကျင်ပါသလား။ ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး crypto…
Real Express Documents များကို အွန်လိုင်းတွင် ဝယ်ယူပါ။
အွန်လိုင်းမှာ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုလိုချင်ပြီး တကယ်အမြန်လိုပါသလား။ ရှာဖွေမှုပြီးသွားသင့်တယ်။ ဤနေရာတွင် MDL တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်စာရွက်စာတမ်းများကို မူရင်း သို့မဟုတ် အတုဖြစ်စေ အချိန်တိုအတွင်း ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ရှည်လျားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပရိုတိုကောကို မလုပ်ဆောင်ဘဲ စာရွက်စာတမ်းများရယူခြင်းအတွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားသောလမ်းကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ?
မှတ်ပုံတင်ထားသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို မှာယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံပေါင်း 120 ကျော်အတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကအာရုံမှာ ဥရောပ၊ အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတို့ဖြစ်သည်။ သင်ကြည့်နိုင်သည်။
Database မှတ်ပုံတင်ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ဝယ်ယူပါ။
ဤနေရာတွင် သင်သည် စာမေးပွဲများမဖြေဆိုဘဲ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အစစ်အမှန်ကို မှာယူနိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုသည် အများအားဖြင့် ၃-၅ ရက်ကြာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များကို ကြည့်ရှုပါ။
2022 စမ်းသပ်ခြင်းမရှိဘဲ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို မှာယူပါ။
ယာဉ်မောင်းစာမေးပွဲတွေဖြေဖို့ ပင်ပန်းနေပေမယ့် မအောင်မြင်ဘူးလား။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိသော်လည်း မောင်းနှင်နည်းကို သင်သိပါသလား။ အွန်လိုင်းမှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲဆိုတာ ရှာနေတယ်ဆိုရင် ဒါပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အလုပ်လုပ်သည့် 3-5 ရက်အတွင်း အမှန်တကယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိမည့် IT ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်, သင်၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုဤနေရာတွင်သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့က အကောင်းဆုံးပဲ။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? အမိန့် ယခု
သင်ဟာ ခရီးသွားဝါသနာရှင်တစ်ယောက်လား။ ခိုလှုံခွင့်ရှာနေတာလား။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ ဤနေရာတွင် စစ်မှန်သောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို အွန်လိုင်းတွင်ဝယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ပတ်စပို့ကို အလုပ်ချိန် 5-6 ရက်အတွင်း ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းကို အစိုးရဒေတာဘေ့စ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတု လိုအပ်ပါက သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် ပေးဆောင်ပါမည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတုသည် ဒေတာဘေ့စ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘိုလီးဗီးယားမှလွဲ၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံများအားလုံးအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ယခုအမိန့်.
သင်သည် အသက်မပြည့်သေးဘဲ ညကလပ်များ သို့မဟုတ် ကာစီနိုများကို သွားရောက်လည်ပတ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။ မင်းကိုရယူခြင်းအားဖြင့် ငါတို့ဒီမှာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အလွန်စကင်ဖတ်နိုင်သော ID ကတ်များ. ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ရာဇ၀တ်ကောင်လို့ မသတ်မှတ်ချင်ဘူးလား။ US၊ EU နှင့် UK ID ကတ်များကို အွန်လိုင်းတွင် ဤနေရာတွင် ဝယ်ယူပြီး ငွေစုပါ။ မှတ်ပုံတင်ကတ်ကို သုံးရက်အတွင်း ထုတ်လုပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်သည်။ ၎င်းကို DHL, UPS, EMS မှတဆင့် သင့်တံခါးဆီသို့ တိုက်ရိုက် ပို့ဆောင်ပါသည်။ ယခုအမိန့်
NCLEX လက်မှတ်စျေးနှုန်း 2022
မင်းက သေချာပေါက် US မှာ သူနာပြု ဒါမှမဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ် ဒါကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ဤနေရာတွင် အချိန်ကုန်သက်သာနိုင်သည်။ လျှောက်ထား MDL မှ NCLEX လက်မှတ်များကို မှာယူခြင်း။ အလုပ်ချိန် 2-3 ရက်အတွင်း သင့်အား လက်မှတ်ရရှိသည်။ NCLEX စာမေးပွဲနှစ်ခုစလုံးကို ဖြေဆိုရန်အတွက် အခြေခံကုန်ကျစရိတ်မှာ သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ်မူတည်၍ US တွင် လိုင်စင်တစ်ခုရှာနေပါက $200 ဖြစ်ပြီး သင့်ပြည်နယ်၏ သူနာပြုဘုတ်အဖွဲ့သည် မှတ်ပုံတင်ကြေး ထပ်မံလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်ထက် ပိုမြန်ပြီး သင်မည်သည့် စာမေးပွဲမှ မဖြေဆိုနိုင်သောကြောင့် စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ ယခုအမိန့်
နေထိုင်ခွင့်ကို အွန်လိုင်းတွင် ဝယ်ယူပါ။
MDL တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို ဤနေရာတွင် အာမခံပါသည်။ နေထိုင်ခွင့်ကို အွန်လိုင်းတွင် ဝယ်ယူလိုပါသလား။ ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်နှင့်နေရာ။ ဤတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အလုပ်လုပ်ရက် ၃-၄ ရက်အတွင်း နေထိုင်ခွင့် ရရှိပါသည်။ ဤနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သည် သင့်လျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် အလုပ်လုပ်လိုပါက အလုပ်ပါမစ်လည်း ပေးပါသည်။ သင်သည် US၊ EU၊ UK၊ Australia နှင့် သင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး တစ်ပတ်အကြာတွင် သင်ရွေးချယ်သည့် မည်သည့်တိုက်ကြီးတွင်မဆို လွတ်လပ်စွာနေထိုင်နိုင်ပါသည်။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ ယခုဆက်သွယ်ပါ နေထိုင်ခွင့်ကို ရယူပါ။
စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို3ရက်အတွင်းမှာယူပါ။
MDL တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့က အနည်းငယ်ပဲ နာမည်ပေးတယ်။ တချို့က အခြားစာရွက်စာတမ်းများ ငါတို့သည်ထုတ်လုပ်သည်;
ဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက်များ, ဆေးလက်မှတ်, SSN, IELTS & TOEFL, မြေယာဘွဲ့တံဆိပ်များ, ကျောင်းဒီပလိုမာများနှင့် အောင်လက်မှတ်များ စသည်တို့ကို
အထက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို ဤနေရာတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လက်မှတ်များကို သင်မှာယူသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကောင်းဆုံးရရှိကြောင်း သေချာပါသည်။ ယခုအမိန့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရွက်စာတမ်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့က မည်သို့ပြောကြသနည်း။
ယာဉ်မောင်းစာမေးပွဲတွေ အကြိမ်ကြိမ် ကျရှုံးခဲ့တယ်။ ဤသည်မှာ MDL ဖြင့် စစ်မှန်သော ဂျာမန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ ပထမဆုံးအကြိမ် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး စာရွက်စာတမ်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် နေရာလွဲမှားနေသည့်တိုင် ပြဿနာများကို လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကတိပြုသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်စပို့နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ အရမ်းမြန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေပါ။ အရမ်းပျော်တယ်!!! Jurgen Neuer D. Augsburg၊ ဂျာမနီ
Jurgen Neuer D.အလွတ်ဆရာ
ပထမတော့ ဒါဟာ လိမ်လည်မှုလို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ။ အရာအားလုံးက အရမ်းမြန်တယ်။ တစ်ခါက တခြားနေရာမှာ ယူရို 5,000 လှည့်စားခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်တော့ MDL မှာ နောက်ဆုံးစမ်းကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကောင်းပြီ၊ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ ဆွီဒင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ၃ ရက်အတွင်း ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ Transportstyrelsen ရုံးကို သွားစစ်ဆေးပြီး အဲဒါကို မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။ မှော်လိုပဲ!!! ဒီနေ့ ငါ့ခင်ပွန်းနဲ့ ငါ့သား နောက်ဆုံးတော့ ဆွီဒင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ ရိုမေးနီးယား ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ဒီမှာရခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖက်သည်!!!
မင်္ဂလာပါ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်တစ်ကြိမ် ပိုမြန်အောင် ကြိုးစားပါ။ ကနေဒါနိုင်ငံသားနေထိုင်ခွင့်- ဂရင်းကတ်နဲ့ မြေလက်မှတ်ကို မင်းတို့ဆီက ယူထားတယ်။ သင်မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုကြာနေပုံရသည်။ စာရွက်စာတမ်းတွေရလို့ ဝမ်းသာတယ်။ ကောင်းသောအလုပ်ကို ဆက်လုပ်ပါ။
ကျေးဇူးပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ယခု ကျွန်ုပ်သည် EU နိုင်ငံသား အပြည့်ဖြစ်သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တွင် ကျွန်ုပ်၏ EU နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ဘယ်လ်ဂျီယံ)၊ မွေးစာရင်း၊ Id Card နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသည်။ ငါမင်းဆီက တခြားစာရွက်စာတမ်းတွေလိုနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ငါ မင်းကို သေချာပြန်ပြီး ဆက်သွယ်ပေးမယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Rita G. Brussels, BG
Pilot လိုင်စင်နဲ့ Boat လိုင်စင်ရဖို့ အွန်လိုင်းမှာ ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဤဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသည့် တစ်ဦးတည်းသော MDL အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သူတို့က အရမ်းကောင်းတယ်။ ယခု ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်ရရှိသော ကိုယ်ပိုင် လေယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ကျွန်ုပ် လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနေပါသည်။ ငါ မင်းကို 4.5 ကြယ် အဆင့်သတ်မှတ်ပေးမယ်။5လုံးတော့ မပေးနိုင်ဘူး...hahaha!
ကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများကို တိကျစွာစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုထားပါသည်။ သို့သော် မည်သူမဆို အစိုးရဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု၍ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုစီအတွက် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် တယ်လီပွိုင့်ကုဒ် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုစီအတွက် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အတည်ပြုဒစ်ကတ်ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် မည်သူမဆို စာရွက်စာတမ်းကို အတည်ပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ စာရွက်စာတမ်းများကို သင်မှာယူသောအခါတွင် ၎င်းတို့အားလုံးကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်ကြားပါသည်။
ဖောက်သည်၏ ဒေတာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ: သင့်ဒေတာသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်လုံခြုံပါသည်။ မင်းရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲ ငါတို့က အဲဒါကို ဘယ်မှာမှ မဖော်ပြဘူး။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ မူရင်း သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းအတုများကို ဝယ်ယူသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ client အနေဖြင့် သင်သည် ဘေးကင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စာရွက်စာတမ်းအစစ်အမှန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အစိုးရအေးဂျင့်များနှင့် ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူးစက္ကူ၊ intaglio ပုံနှိပ်ခြင်း၊ မိုက်ခရိုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် သာမန်မျက်စိဖြင့် သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသော ချောင်းဆိုးဆေးများနှင့် စမ်းသပ်စက်အချို့ကဲ့သို့သော အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာရွက်စာတမ်းအတုများအတွက် အကြံပြုထားခြင်း မရှိပါ။ အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း ရနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းအစစ်အမှန်များ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ၊ ID's စသည်တို့ကိုသာ သွားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား အကြံပြုထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်မှန်သော စာရွက်စာတမ်းများသည် အရာအားလုံးကို ခေတ်မီစွာ အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ရှုံးနိမ့်မှုအတွက် အတိုင်းအတာ မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရွက်စာတမ်းအစစ်အမှန်တွင် ၎င်းကို စကင်န်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းအဆင့်အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်စေသည့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုံခြုံရေးအမှတ်အသားများရှိသည်။
Biometric ဒေတာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း-
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ၊ ဗီဇာများ သို့မဟုတ် အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို မှာယူသည့်အခါ အောက်ပါတို့ကို ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်- လက်ဗွေ၊ လက်ဂျီသြမေတြီ၊ နားရွက်ဂျီသြမေတြီ၊ မြင်လွှာနှင့် မျက်ဝန်းပုံစံများ၊ အသံလှိုင်းများ၊ DNA နှင့် လက်မှတ်များအပါအဝင် သင်၏ထူးခြားသောအထောက်အထားများကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။ အစိုးရဒေတာဘေ့စ်တစ်ခု။ ထို့ကြောင့် လိုအပ်ပါက၊ အစိုးရဒေတာဘေ့စ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ biometric အချက်အလက်ကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် အချက်အလက်မတူညီမှု သို့မဟုတ် ဆိုးရွားသောမှတ်တမ်းရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများက ၎င်းတို့အား အသစ်တစ်ခုဖြင့် အစားထိုးပြီး ၎င်းတို့ကို အစိုးရ၏အမြင်တွင် ပြင်ပေးနိုင်ပါသည်။
သတိပေးချက်!!! လိမ်လည်သူများနှင့် လှည့်စားမှုများကို သတိထားပါ။
အွန်လိုင်းတွင် ရရှိနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းအတုများ အများအပြားရှိပြီး အစစ်အမှန်အတုအယောင်များကိုသာ စျေးပေါပြီး စာရွက်စာတမ်းအတုများကိုသာ ပေးဆောင်ပါသည်။ သင်၏အမှားသည် သင့်အား ကြီးမားသောဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် စာရွက်စာတမ်းများကို အွန်လိုင်းတွင် ဝယ်ယူစဉ် သတိထားပါ။ ဒါပေမယ့် ငါတို့နဲ့အတူ မင်းဟာ လုံးဝလုံခြုံတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရွက်စာတမ်းအစစ်အမှန်အားလုံးသည် 100% စစ်မှန်ပြီး တရားဝင်နိုင်ငံတော်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော အစိုးရဒေတာဘေ့စ်တွင် စာရင်းသွင်းထားကြောင်း သေချာပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင့်အချက်အလက်များကို လုံခြုံရေးနှင့် လျှို့ဝှက်ရေးအလွှာများစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ရှိနေကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရာကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဖောက်သည်များ ကျေနပ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကြှနျုပျတို့အကွောငျး။ သင့်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ကူညီဖြေရှင်းပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သော အတိုင်ပင်ခံများနှင့် အခမဲ့ ရက်ချိန်းတစ်ခု ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ MDL သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: စာရွက်စာတမ်းများ မပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသော အဆင်မပြေမှုများ၊ 99.00% သင့်ငွေကို တူညီသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့် သင့်ထံ ပြန်အမ်းပါသည်။
Florida နှင့် London ရှိလှေလိုင်စင်ကိုဝယ်ပါ
ဥရောပ၌လေယာဉ်အမှုထမ်းများအသုံးပြုသောလေယာဉ်ပျံလိုင်စင် MPL ကိုလျှောက်ထားပါ
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးရှေ့ပြေးလိုင်စင် CPL ကိုအွန်လိုင်းမည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း
ဖုန်း ဥပမာ- +49 1521... *
မူပိုင်ခွင့် @MyDriversLicence။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ဤနေရာတွင် WhatsApp မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသတင်းပို့ပါ